Torohevitra fito lehibe tokony hatao aorian'ny fijaliana amin'ny diabeta-diabeta-kabary-Sinocare
Torohevitra fito lehibe tokony hatao aorian'ny fijaliana diabeta
Fotoana: 2020-02-27 Hits: 273
1. Fahalalana fahalalana momba ny diabeta
Farafaharatsiny mba tokony ho takatra ny famaritana ny glucose amin'ny glucose amin'ny fifadian-kanina sy ny glucose ao aorian'ny postprandial.
Inona avy ireo antony mahatonga ny glucose glucose amin'ny fifadian-kanina avo?
Inona avy ireo antony mety mahatonga ny glucose ambony aorinan'ny postprandial?
Inona no ho vokany raha avo ny glucose ao amin'ny ra aorian'izay?
Ny valin'ireo fanontaniana ireo dia hampahafantarina amin'ny antsipiriany ao amin'ireo lahatsoratra manaraka.
2. Fampiharana am-pahalalana fahalalana amin'ny sakafo
Rehefa mahita gilasy kapoaka iray, ny vavany dia mandoka noho ny fitiavam-bola, ary ny vavony, tenda ary koa ny lela dia lasa vonona ny hanandrana azy; fa mandritra izany fotoana izany, ny ati-doha misaina feno fankahalana dia miteny fa hampitombo ny haavon'ny glucose ao anaty ra imbetsaka izany.
Na izany aza, ho tsara be izany rehefa misy feo malefaka: mahazo toky ianao fa mihinana gilasy, satria tsy maninona ianao raha mihinana lovia kely masaka iray lovia kely, na mihazakazaka adiny iray aorian'ny sakafo, na raha omena insuline an'ny XX IU mandritra ny fotoana maro.
Raha ny marina dia tsy manaiky ny torohevitry ny olon-kafa mihitsy ny mararin'ny diabeta mikorontana fa ny congee dia afaka mampiakatra fatratra ny glucose glucose ao anaty ary tokony ho raisin'ny kely ary mamy loatra ilay akondro ary tsy azo hanina. Mifanohitra amin'izany no hiezahan'izy ireo manampy legioma sy voamadinika raha ampangotrahina ny kongee na mampihena ny fihinanana sakafo foto-tsakafo rehefa mihinana ilay akondro. Amin'ny alalàn'ny fianarana sy fikarohana lalina dia azonao atao ihany koa ny manao an'io. Rehefa avy mianatra ny fahalalana momba ny diabeta ianao dia tokony hatoky tena toy izany.
Mety hiteny ianao hoe: "Afaka mahafantatra fahalalana vitsivitsy momba ny sakafo aho, saingy mbola sarotra be ny mampihatra azy tsara". Mety izany. Azonao atao ny mahita raha afaka manampy anao ity traikefa manaraka ity.
3. Mampivelatra fahazarana manao fanatanjahan-tena tsara
Saika ny tompon'ny fifehezana glucose rehetra dia maniry ny hanao fanatanjahan-tena, toy ny mihazakazaka eny ivelany, mandeha amin'ny valan-javaboary, mihazakazaka mihazona dumbbell, mandeha amina fehikibo fasika, milalao badminton, milalao tenisy ambony latabatra, milomano (eny amin'ny ririnina aza) ary mitaingina bisikileta. Azafady mba tadidio: ireto no fialam-bolinao sy fahazarana, fa tsy ireo hetsika fanaonao indraindray.
Azafady, atreho ny hakamoanao, atombohy manomboka amin'ny dingana voalohany, ary avy eo dia hanomboka dia mahasalama ianao.
4. Manaova namana amin'ny dokotera tena tsara
Ny bokin'i Manao namana amin'ny dokotera dia nosoratan'Andriamatoa Wu Haiyun, lohan'ny dokotera ao amin'ny Departemantan'ny kardiolojia ao amin'ny Hopitaliben'ny Tafika Fanafahana ny Vahoaka. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fisakaizana amin'ny dokotera dia ny azonao ialana amin'ny fitsimbinana. Ohatra, resy lahatra tanteraka ianao amin'ny dokotera antsoina hoe fahagagana izay milaza fa misy fanafody tsara avy any an-tany hafa, ary mararin'ny diabeta maro no mijanona tsy mihinana fanafody aorian'ny fihinanana azy ary ny haavon'ny glucose ao amin'ny ra koa dia mahatratra ny fenitra mahazatra. Tamin'ny vidiny 1999 RMB no vidiny voalohany nefa amin'ny 999 RMB ankehitriny; Rehefa vonona ny hividy azy ianao dia afaka manontany amin'ny namanao dokotera, ary avy eo mety ho voatahiry ny fahasalamanao sy ny volanao.
Aza mieritreritra azafady fa sarotra be ny mana-namana amin'ny dokotera. Araka ny fantatro farafaharatsiny, na ny dokotera na ny mpitsabo mpanampy ao amin'ny Departemantan'ny Endocrinology dia te-hihavana amin'ireo mararin'ny diabeta.
5. Ny fanaovana namana miaraka amin'ny mararin'ny diabeta tsara
Tsy irery ianao amin'ny lalan'ny fanoherana diabeta. Rehefa tsy hainao ny mitsabo ny indiran'ny fisorohana ny insuline dia lazain'ny marary diabeta aminao fa azo esorina ilay fampidiran-dresaka aorian'ny famatrarana hafanana isan'andro miaraka amina ovy sy lamba famaohana mafana.
Rehefa mahatsapa tsy mahazo aina amin'ny vavony ianao aorian'ny fitantanana Metformin, dia hilaza aminao ny mararin'ny diabeta fa azo alaina ny alahelo ao amin'ny vavony aorian'ny fanoloana ireo takelaka misy fonosana Metformin Enteric.
Rehefa mandeha ny rà mandriaka aorian'ny fianjerana tampoka mandritra ny fotoana fivezivezena dia hisy marary mararin'ny diabeta hilaza aminao fa ny ratra dia afaka sitrana amin'ny ampitso aorian'ny fandatsahana insuline roa latsaka amin'ny ratra.
Ny olana isan-karazany sendra anao dia efa niainan'ny mararin'ny diabeta hafa, ohatra, rehefa very ianao; rehefa miahiahy ny amin'ny fiainana ianao satria manana hypoglycemia lehibe; rehefa manana fahasarotana ianao; ary rehefa lasa tsy mandaitra ny zava-mahadomelina anao. Hilaza aminao ny fomba sy ny zavatra niainany izy ireo amin'ny fitsaboana olana toy izany. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny fomba sasany dia tsy fantatry ny marary diabeta ihany.
6. Fitantanana zava-mahadomelina araka ny filaminana ara-pitsaboana
Raha afaka miatrika ny tsy famongorana ny diabeta ianao dia tokony hilamina ary handinika tsara ny fomba hihazonana ny fiaraha-miaina am-pilaminana miaraka amin'ny diabeta. Ny fampiasana zava-mahadomelina dia azo antoka fa fomba iray tena lehibe.
Ireto fitandremana manaraka ireto dia tokony ho tsikaritra amin'ny fampiasana zava-mahadomelina:
1) Ekeo ny torohevitry ny dokotera any amin'ny hopitaly mahazatra, ary raiso tsara araka ny baikon'ny fitsaboana ny fanafody (Fanamarihana: Aza manaiky ny fanafody atolotry ny olona raha tsy misy ny taratasy fanamarinana momba ny dokotera miasa).
2) Aza manahy fa misy poizina azo avy amin'ny fanafody rehetra. Raha ny marina, ny vokatra tsara ateraky ny zava-mahadomelina amin'ny vatan'olombelona dia mihoatra lavitra ny voka-dratsiny; ankoatr'izay, saika ny zava-mahadomelina efa namidy dia nandalo ny fanamarinana ara-pahasalamana.
3) Diniho tsara ny vokatry ny zava-mahadomelina, amin'ny alàlan'ny famakafakana ny valin'ny fanaraha-maso ny haavon'ny glucose ao amin'ny ra (izany hoe fitsaboana tsara ny fanaraha-maso ny glucose ao amin'ny ra).
7. Fitsaboana tsara ny fanaraha-maso ny glucose ao amin'ny ra
Araka ny nolazain'ny marary diabeta dia tsy tokony holavina ny ran-dranonareo tsirairay avy. Vokatry ny fanaraha-maso rehetra ny glucose amin'ny ra dia ny fampahalalana nangonina nandritra ny diabeta fanoherana anao; ny fandraisana andraikitra dia tsy azo atao amin'ny ady raha tsy amin'ny fikarakarana tsara ireo fampahalalana nangonina tany an-tsaha.
Ohatra, amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny haavon'ny glucose amin'ny rà dia ara-dalàna amin'ny marary diabeta manaraka. Tamin'ny 12 septambra, ny haavon'ny glucose amin'ny rà dia 4.3 mmol / L taorian'ny sakafo hariva, ary 9.8 mmol / L talohan'ny hatory. Rehefa avy nahalala an'izany aho, dia nifandray taminy haingana araka izay tratra. Nolazainy tamiko fa satria legioma be loatra no nohanina tamin'ny sakafo hariva, tsy ampy ny kaloria, rehefa hita ny hypoglycemia taorian'ny sakafo hariva, dia natahotra izy sao hisy hypoglycemia amin'ny maraina, ka dia nisotro yaourt iray kapoaka; saingy avo ny glucose ao amin'ny ra alohan'ny fanambadiana. Na izany aza, ireto zava-misy manaraka ireto dia ianarana amin'ny alàlan'ireto fandrefesana glucose amin'ny ra ireto:
Rehefa misakafo dia tsy tokony alaina irery ny legioma hahatonga ny haavon'ny glucose ao anaty ra hahatratra ny lanjany mahazatra, ary ny hena mety dia tokony horaisina koa; ary satria ny vatan'olombelona dia tena voataonanà yaourt iray kapoaka, ny habetsahan'ny yaourt mihinana dia mety hihena antsasaky raha misy toe-javatra mitovy amin'izany amin'ny manaraka.
Tamin'ny 14 septambra, 11.1 mmol / L ny glucose ao amin'ny ra alohan'ny fanambadiana. Toy ny taorian'ny sakafo hariva dia nilalao lalao basikety izy ary nahatsapa fanina kely; avy eo dia naka voaloboka sy yaourt avy hatrany izy, izay niteraka hyperglycemia.
Raha tsy mbola tsara ny haavon'ny glucose ao anaty ra aorian'ny famongorana ireo anton-javatra hafa, dia azo heverina ho tsy mety amin'ny fitsaboana ankehitriny io fanafody io, ary ny dokotera dia azo jerena amin'ny fanitsiana ny regimen.
Taty aoriana dia nihatsara sy nihatsara ny haavon'ny glucose ao amin'ny ràny. Raha ny marina dia mpianatry ny lisea ambaratonga voalohany izy tamin'ny faha-15 taonany.
Pejy mialoha: Fahalalana ilaina ho an'ny ankizy mararin'ny diabeta
Pejy manaraka: Antony folo mahazatra indrindra amin'ny fiovan'ny haavon'ny glukose ao anaty